China Square Shower Seti Abavelisi kunye nababoneleli-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > ISeti yeshawari > Iseti yeshawari yesikwere
Iseti yeshawari yesikwere Abavelisi
I-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd. ngumvelisi oqeqeshiweyo kunye nomthengisi eTshayina. Inembali engaphezulu kweminyaka engama-20 kushishino lweplastiki kunye neminyaka engaphezu kwe-10 kushishino lwempahla yococeko. Siphumelele isiqinisekiso senkqubo yolawulo lwe-ISO 9002S ekuqaleni kuka-1999. Senza zonke iimveliso eTshayina. Uluhlu lwemveliso yethu yococeko lubandakanya oku kulandelayo: intloko yeshawa, ishawa yesandla, isilayidi sesilayidi iseti, isibiyeli seshawa, ithumbu leshawa, iseti yesikwere seshawa, isibiyeli sodonga lweshawa, izincedisi zeshawa, ishawari, ishawa kunye nezincedisi zokuhlambela, kunye nezinye iintengiselwano zemveliso yococeko. kwi Made in China website.
Iseti yeshawari yesikwere luluhlu lweemveliso kwiseti yethu yeshawa. Isikwere sahlukile kuyilo lwemveli olujikelezayo. Iya kutsala abathengi ukuba babe yimodeli yoyilo kwimarike. I-201 yensimbi engenasici kunye ne-chrome-plated unyango yenza ukuba umkhiqizo ubonakale ukhanya ngakumbi, kunye nesethi yesikwele seshawa kunye ne-square faucet, iphezulu kakhulu.
Ixhotyiswe ngoomatshini abatsha beplastikhi abalawulwa yikhompyutha; iinkqubo zokuvavanya eziphucukileyo kunye noomatshini bokupakisha abalungileyo, siyakwazi ukukubonelela ngeemveliso ezisemgangathweni njengoko kufuneka. Ngokumalunga nokupakisha, silungile ekupakisheni amadyungudyungu kunye neebhokisi zemibala, ewe, sinokubonelela ngokupakisha okukhethekileyo ukuba abathengi banemfuno. Iiseti zeshawari yesikwere zipakishwa ngokubanzi kwiibhokisi zemibala okanye iibhokisi ezimhlophe. Njengomvelisi, sineziko lethu lokubumba, iinjineli ezinamava zilungele ukwenza naluphi na uphuculo lohlengahlengiso olucelwe nguwe ngexesha elikhawulezayo.
Iseti yeshawari yesikwere yentsimbi engatyiwayo
Iseti yeshawari yeplastiki ye-ABS, ehambelana neseti yeshawari enkulu kunye nesibiyeli esisikwere, ibonakala ilungelelanisiwe. Wamkelekile ukuba uthenge iSeti yeShower yeStainless Steel yesikwere kuthi.
ISeti yeshawari efakwe kwi-Stainless Steel ye-Chrome-plated
Umphandle we-Stainless Steel ye-Chrome-efakwe kwi-Shower Seti yeSeti yeshawari ine-chrome-plated. Emva kokuthenga le seti, kufuneka udibanise kuphela ne-faucet ukuyisebenzisa. Iisuti ezinkulu ezinjalo zithandwa kakhulu eRashiya.
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili Iseti yeshawari yesikwere zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu Iseti yeshawari yesikwere uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.